July 23, 2008, 9:11 am Filed under: True Feelings `နှုတ်ဆက်ခြင်းဆိုတာအပြီးပိုင် ခွဲခွာခြင်းအတွက်သာဆိုရင်(ငါ)နှုတ်မဆက်တော့ဘူး သူငယ်ချင်း´
ထိုနေ့က မိုးကောင်းကင်မှ မိုးစက်မိုးပေါက်များက တစ်နိုင်ငံလုံးကို ခပ်သည်းသည်း ဖြန်းပက်နေခဲ့သည် .. ။ ကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံး မည်းနက်နေပုံကို စိတ်အလိုမကျ အနည်းငယ်ဖြစ်နေသော ကျွန်မနားထဲမှာ အဆက်မပြတ် ပစ်ခတ်နေသော မိုးကြိုးပစ်သံများထက် ဆိုးရွားသော သတင်းများကို ကြားသိရချိန် ပြင်ဆင်ပြီးသား ဖြစ်သော်လည်း ရုတ်တရက်မို့ ဆွံ့အစွာ နင့်ခနဲ ရင်မှာလှိုက်ခတ်သွားသည်။ သူတို့ကို ကျွန်မ သိခဲ့သော သက်တမ်းက သိပ်မကြာလှသေး .. ။ စကားတွေအများကြီး ဖောင်းပွပြီး ကျွန်မတို့ မသိကျွမ်းခဲ့ .. ။ အလုပ်အတူတွဲလုပ်ရင်းသာ ပြင်းပျသော စိတ်ဓာတ်တူသူချင်း ၊ အပြန်အလှန် နားလည်ကာ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်မျိုး အပြည့်မွေးခဲ့ကြသည် .. ။ ရင်ဆိုင်ရမည့် အကျိုးဆက်များအားလုံးကို အတူတကွ ဖြတ်သန်းမည်ဆိုသော စိတ်များအပြည့်ဖြင့် မိမိယုံကြည်ရာကိုသာ အတတ်နိုင်ဆုံး လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်မထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သော သူတို့ကို စကားလုံးတွေဖြင့် ကျွန်မ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မဖွဲ့ဆိုခဲ့ .. ။ ဒါပေမယ့် … နက်ရှိုင်းလှသော ရင်တွင်းတစ်နေရာ .. ဖြူစင်သန့်ရှင်း ခိုင်မြဲသော ယုံကြည်ခြင်း ကျောက်စာတွေက အလိုလိုထိုးထွင်းထားပြီးသားဆိုတာ အပြန်အလှန် သိခဲ့ကြပါရဲ့။
`လူတွေစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်နေတဲ့တရားဥပဒေ ၊ စည်းမျဉ်းတွေဆိုတာစာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ပြဌာန်းချက်တွေပါ ..အမှန်တရားသစ္စာ စည်းမျဉ်းဥပဒေဆိုတာဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မကြည့်တတ်တဲ့သဘာဝတရားကြီးမှာပဲ ရှိပါတယ် သူငယ်ချင်း´
`လူသားဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသက်ဆက်ရှင်နေမယ့် ငါတို့နှလုံးသားတွေဟာဖန်တီးချင်တိုင်း ဖန်တီးနေတဲ့ စာနာမဲ့အာဏာရှင်များအောက်ဘယ်တော့မှ မပျောက်ဆုံးသွားဘူး သူငယ်ချင်း´
`မုန်တိုင်းတိုက်လို့ ငါတို့ပြည်သူတွေဒုက္ခပေါင်းများစွာ ဝေနေချိန်မဖြစ်စလောက် ငွေစကလေးနဲ့ငါတို့ ဘယ်သူ့ပေးရမလဲ ဖြစ်နေချိန်ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ခရီးဝေးကြီးတစ်ခုကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင် အမှီရောက်အောင်သွားအတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပေးခဲ့တာတွေငါတို့ရင်ထဲ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး သူငယ်ချင်း´
`ငါတို့လမ်းမပေါ်ထွက်ချိန်နှုတ်ပိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေသူတွေကိုငါတို့လေးစားမှုပေး ဘာမှမပြောပေမယ့်နောက်ကွယ်ကနေ ဓားနဲ့ထိုးသူတွေကိုတော့နှုတ်က မဖွင့်ဟချင်ခဲ့ပေမယ့်ငါ့အသဲနှလုံးဟာ နာနေတုန်းပဲ သူငယ်ချင်း´
`အမှန်တရား ဥပဒေဆိုတာလူတစ်ယောက်ဘ၀တစ်ခုလုံးကိုအာဏာရှင်တွေအတ္တနဲ့ ချုပ်နှောင်ထားလို့မရဘူး သူငယ်ချင်း … ´
`အတူလက်တွဲခဲ့ကြသူတွေမို့နေရာဒေသတွေမကွဲချင်ပေမယ့်သွားနှင့်ဦးပေါ့ သူငယ်ချင်းရေ …လွင့်မျောသွားတဲ့ ရွက်ဝါတစ်ရွက်ပြီးရင်နောက်တစ်ရွက်အလှည့်ပေါ့ …အလှည့်တွေဆက်ပြီးရင်းဆက်ငါ့ရွက်ဝါလေးအလှည့်လည်းမကျိန်းသေ မဝေးတော့ …
ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသတွေပဲရောက်ရောက်အဆိုးဆုံးကိုပြင်ဆင်ရင်းအကောင်းဆုံးကိုကြိုးစားမိခင်ဌာနီရင်ခွင်မှာ ငါတို့တစ်နေ့ပြန်ဆုံကြမှာပေါ့´
နေရာဒေသတွေ ဘယ်လိုကွဲကွာခြားနားလည်း ယုံကြည်ချက်နဲ့ ပန်းတိုင်ကတော့ အတူတူဘဲ။ ရောက်တဲ့နေရာ၊ ကျတဲ့အခန်းကနေ အကောင်းဆုံး ဆက်လက် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြစို့ရဲ့။တွဲလက်များ ညီစေ။ ဒီမိုကရေစီအရေး မုချအောင်ရမယ်။
July 24, 2008 @ 6:03 pm Reply	ညီမငယ် လင်းလက် …
ရင်ကို ထိရှပြီး ရဲရင့် ပြတ်သားတဲ့ စကားလုံးတွေအတွက် ကျေနပ်မိပါတယ် ….ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ပါစေ ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုး နဲ့ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်အတွက် လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာမှန်သမျှကို လုပ်ဆောင်နေရဦးမှာပါ …အခြေအနေအရ အနေဝေးခဲ့ရရင်လည်း မှန်ကန် တည်ကြည်တဲ့ ရင်ထဲက သစ္စာကြောင့် စိတ်ချင်း အမြဲတမ်း နီးနေကြမှာပါ …
July 24, 2008 @ 6:56 pm Reply	ညီမလေးရေ စိတ်မကောင်းဘူးဟာ
July 25, 2008 @ 7:49 pm Reply	ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ ညီမဆီကို မကြာခဏတော့ ရောက်ရောက်ဖြစ်နေတာပဲ။ ဘာမှသာ မရေးဖြစ်ဘဲ ပြန်ပြန်သွားနေမိတာ။ နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်း တိုးမပေးတာက မြန်မာပြည်ရဲ့ မုန်တိုင်းကိစ္စမှာ လူကိုယ်တိုင် သွားကူကြလို့ လို့ သတင်းကြားရတယ်ညီမ။ အဲဒါကိုပါ သတင်းအချက်အလက် အသေးစိတ်ပုံစံမျိုး သိချင်သေးတယ်။
July 26, 2008 @ 10:49 am Reply	ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ စာသားတွေ အရမ်းထိတယ်။
July 31, 2008 @ 6:19 am Reply	လုံးဝကို စိတ်မကောင်းစရာတွေပါပဲ။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသပဲရောက်ရောက် ခံယူချက်တွေ နဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ ကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြောင်းမသွားဘူးဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ။
July 31, 2008 @ 6:49 am Reply	88 နောက်ပိုင်းမှ လူဖြစ်လာတဲ့ ညီမလေးရဲ့ ကလောင်သွားကတော့ အင်မတန်မှ ထက်လှပါပေတယ်.. အသက်ငယ်သော်လည်း စာပေနယ်မှာ ၀ါရင့်လှပါပေတယ်..
Comment by အဇ္ဈတ္တပြခန်း
August 1, 2008 @ 2:47 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI